Acuity LED 1600 - BaganMart
Canon MAXIFY MB5120 Printer
Toshiba e-STUDIO Multifunction Printers မိတ္တူစက်
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 657 view counts
Brand : Acuity
Model : LED 1600
လုပျငနျးအမညျ : SKY JET Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 01- 8550411, 09-5407093, 09- 73100779, 09- 797329924 , 09- 49316456.
Max Media Width : 63.7’’’(1620mm)
Max Print Width : 63.3’’’(1610mm)
Max Rigid Size : 40’’x60’’(1016mmx1524mm)
Max Substrate Thickness : Roll;0.04’’(1mm)
Max Rigid Weight : Up to 15bs
Max Print Speed : 215ft/hr(20m2/hr
Printhead : FUJIFILM Dimatix Q-class printheads
Ink : 8colors
Physical Dimensions : 127’’(W)xx31;;(D)x1.524mm(H)
Weight : Printer 617lbs, Tables 110lbs(Printer280kg
Power : AC100-120v, 200-240, 50/60Hz
Network : USB2.0
Production : 600x500
Standard : 900x800
Quality : 1200x1200
High Quality : 1200x1200
1.	Acuity LED 1600 UV inkjet printer.
2.	Fujifilm LED UV lamp system.
3.	Fujifilm Uvijet inks.
4.	Fujifilm Dimatix heads.
Outdoor Advertising ကြော်ငြာလောကတွင် အရည်အသွေး မြင့်မားသော ပုံနှိပ် နည်းပညာများ ရောက်ရှိ လာစေရန်၊
စီးပွားရေး လုပ်ငန်း နယ်ပယ်များတွင် ဖွံဖြိုး အောင်မြင်မှုရစေရန် Vinyl lnkjet Printer များဖြင့် အရောင်းမြှင့် ကြော်ငြာ လုပ်ငန်းများသို့ အထောက်အကူ ပေးသွားရန်၊
Vinyl lnkjet Printer စက်ကြီးများ၊ ၄င်းတို့အတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေး စစ်မှန် ကောင်းမွန်မှုကို မိမိကျွမ်းကျင်ရာ နယ်ပယ်မှ ဖြည့်စည်းပံ့ပိုးပေးရန်၊မန်မာ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ကြော်ငြာနယ်ပယ်၏ Inkjet Printing လုပ်ငန်းတွင် စက်ကိရိယာ ပစ္စည်းရော၊ နည်းပညာပါ စစ်မှန်ကောင်းမွန်သည့် ၀န်ဆောင်မှုပေးသော လုပ်ငန်းကောင်း တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်သွားရန်၊
မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုများအတွက် တည်ကြည်မှန်ကန်သော စီးပွားရေး လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်အဖြစ် ကာလရှည်ကြာစွာ လက်တွဲရပ်တည်သွားရန်၊၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် Digital Inkjet Printing လုပ်ငန်းကို Sky Jet အမည်ဖြင့်စတင်တည်ထောင်သည်။
၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် Golden Heroes ကုမ္ပဏီလီမီတက်ကို စတင်ဖွဲ့စည်း၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် Phaeton Vinyl စက်ကြီးများကို တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ Universal စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည်။
၂၀၀၇ခုနှစ်မှ၂၀၁၆ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမြို့ကြီးများအနှံ့အပြားသို့ Vinyl lnkjet Printer စက်ကြီးပေါင်း ၄၅၀ ကျော်ဖြန့်ဖြူးထားပြီး ဆက်လက် တိုးချဲ့ ရောင်းချဖြန့်ဖြူး ပေးလျက်ရှိသည်။Golden Heros ကုမ္ပဏီလီမီတက်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (၅) ဦး၊ ရုံးဝန်ထမ်း (၆၀) ဦး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့် (၅) ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
UD-32712X MASTER OF PRODUCTION
For Acuity LED 1600
May I get the quotation for "Acuity LED 1600" ?